I Gambia dia firenena ao Afrika Andrefana izay manana morontsiraka amin' ny Ranomasimbe Atlantika. I Banjul no renivohiny. Mirefy 11 295 km² ny velaran-taniny.
Sarin-tanin' i Gambia (voahodidin' ny tanin' i Senegaly)
Saika ao anatin' ny tanin' i Senegaly, afa-tsy ny tapany mitodika any Atlantika, i Gambia. Mamakivaky azy ny ony Gambia. Anisan' ireo firenena kely ao Afrika izy. Nahazo ny fahalevan-tenany i Gambia tamin' ny taona 1965.
Ny vahoaka gambiana dia ahitana vondrom-poko maromaro ka ireto ny lehibe indrindra: ny Malinke (40 %),ny Peola, ny Vôlôfo, ny Sôninke ary ny Diola. Manaraka ny fivavahana silamo mifagaro finoan-drazana afrikana ny 95 %n' ny Gambiana; vitsy ihany ny Kristiana. Mpamboly ny ankamaroan' ny Gambiana nefa ianjadian' ny toetany maina io firenena io. Nisy mponina 2 173 999 tao Gambia tamin' ny taona 2020 ka 192 mp./km2 ny hakitroky ny mponina.
I Gambia eo anivon' izao tontolo izao
Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialin' i Gambia na dia miteny mandinge, vôlôfo, peola, sôninke, serere, kriô sy maro hafa ny mponina ao. Miteny frantsay ihany koa ny Gambiana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambia&oldid=1040791"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:07
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:07 ity pejy ity.